I-SAVRUPSON HERITAGE IKHAYA LOKUHLALA/UKUBHEDE KANYE NEBUSASA
(22 okushiwo abanye)
Jalandhar, Punjab, i-India
Ikamelo e-ikhaya eliyindawo yokuhlala ibungazwe ngu-Dinesh
Yakhiwa ngekhulu lamashumi amabili, iSavrupson Heritage Haveli itholakala maphakathi nedolobha laseJalandhar. Isakhiwo esihle esenziwe nge-architecture ye-Rajasthani.I-Haveli inezinto zobuciko eziningi zakudala eziboleka ukuthinta kobuhlanga okuzokuthatha esikhathini esidlule. Izungezwe utshani obukhulu kanye nezihlahla eziminyene. Indawo ethule futhi enokuthula yokuhlala futhi uphumule.Ifanele izingane.Inyama yobisi exhumene nezilwane zasemapulazini izokhanga abathandi bezilwane.Eduzane nezitimela zesitimela namabhasi.
I-Savrupson Heritage Haveli inamagumbi okulala amakhulu anamavulandi amakhulu abheke uhlaza oluzungezile. U-Shipra no-Dinesh kanye nethimba labasebenzi abazinikele banakekela izivakashi eziphathwa njengomkhaya.Izingxoxo ezifudumele ziyinqaba yethu okungekho ihhotela elingakwazi ukusinikeza.Imindeni enezingane izokwazi ukuthola izintombi.Kunakekelwa kakhulu lapho kugcinwa amagumbi okulala futhi izindlu zokugezela.Ibhulakufesi elimnandi liyaphakelwa. Abathandi bokudla bazoyithanda le ndawo.Igumbi lokulala ngalinye linendlu yokuwasha enamathiselwe futhi lihlalisa izivakashi ezimbili.
5.0(22 okushiwo abanye)
5.0 · 22 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-22
Hi,I am happily married and blessed with two beautiful daughters.I am a Canadian citizen but i live in Jalandhar, India. I love meeting people from all walks of life.I like hosting guests at my place.I like travelling, reading Frederick Forsyth, Jefery Archer etc.I like hindi music and just love good food.
Hi,I am happily married and blessed with two beautiful daughters.I am a Canadian citizen but i live in Jalandhar, India. I love meeting people from all walks of life.I like hosting…
Usizo luzohlinzekwa uma kudingeka.
UDinesh Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$106.
Hlola ezinye izinketho ezise- Jalandhar namaphethelo